Ijazi lasebusika, Ijazi Labesilisa Langaphandle, Ijackethi Engangenwa Manzi - Qinghua
Ijazi lamadoda elibandayo
Ijackethi Yamadoda Phansi / Ukotini
Ukotini Abesilisa Abancane / I-Windbreaker
Ijazi labesifazane elibandayo
Ijackethi Yabesifazane Phansi / Ukotini
Abesifazane Ukotini / Windbreaker
Inkampani yethu izoba izidingo zamakhasimende nokuklanywa kwezingubo, ubuchwepheshe, indwangu ihlanganiswe, yethulwe njalo ngokuhambisana nezimpawu ezenziwe ngokwezifiso zekhadi lezingubo.
Singabantu inkampani eqinile ingubo ukuthekelisa, inkampani usebenza ibhizinisi angaphandle ukuthekelisa ibhizinisi iminyaka eminingi, ikakhulukazi ucwaningo nentuthuko, ukukhiqizwa, ukuphathwa abasha imfashini amadoda kanye eziqongweni abesifazane. Inkampani yethu izoba izidingo zamakhasimende nokuklanywa kwezingubo, ubuchwepheshe, indwangu ihlanganiswe, yethulwe njalo ngokuhambisana nezimpawu ezenziwe ngokwezifiso zokuklanywa kwezingubo, ngokuya ngezidingo zangempela zezivakashi ezizolungisa (njenge: isitayela, ubuchwepheshe obukhethekile, izidingo zamanani… )…
Sineqembu eliqinile lobuchwepheshe embonini, amashumi eminyaka wesipiliyoni sobungcweti, izinga elihle kakhulu lokuklama.
Le nkampani igxile ekukhiqizeni imikhiqizo esezingeni eliphakeme, amandla aqinile wezobuchwepheshe, ukuthuthukiswa okuqinile, izinsizakalo ezinhle zobuchwepheshe.
Ukugcinwa Kwansuku Zonke Kwejacket Down
1, Ukuhlanza okomile Ijakhethi engaphansi ingahlanzwa uma yomile. Kungasulwa lapho ijakhethi ephansi inamabala amabi, kepha idinga ukuthunyelwa kuhlanzela owomile ukuze kuhlanzwe, ukuze kugwenywe ukulimala kwejackethi ebangelwe yizinqubo zokuhlanza ezomile ezingafanelekile noma ezingezansi.
Izici Zezinhlobo Ezihlukile Zamajakhethi Aphansi Abesifazane
Thayipha uhlobo lwephrofayili yohlobo lwe-A olubonakala ngengubo nejazi elingenasinqe, noma ulayini okhalweni omncane, nomphetho obanzi. Ingagqamisa nje umzimba omncane noma okhalweni omncane, kepha futhi imboze isisu sakho, ibukeke ifinyelela umphumela wokuncipha, ifihle ukukhubazeka komzimba. Uhlaka jikelele lulula ...
Ukubaluleka Kokwenza Ngokwezifiso
Izinzuzo ezenziwe ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende: 1. Intengo ongayikhetha: amakhasimende angenza ngezifiso izitayela ngentengo ehambisanayo ngokusho kwamaqembu abo abathengi, ukuze baqonde kangcono isikhala senzuzo. 2. Indwangu ongayikhetha: inkambiso ingakhetha ngokukhululekile nangokuguquguqukayo indwangu esetshenziswe yi-c ...
Ucingo: +86 13522355655
I-imeyili: katya777 @ aliyun.com / guoyuan4018 @ 163.com
Ikheli: Igumbi 3082, iTianya Clothing Market, No.2 Yabao Road, Chaoyang District, Beijing, China